ခွေးတွေက ဂီတကို ခံစားတတ်သလား
HomeGeneral Knowledgeခွေးတွေက ဂီတကို ခံစားတတ်သလား
Posted in General KnowledgeUnique Things
ဂီတဆိုတာဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီတိုင်းရဲ့ ခံစားမှုအပေါ် အခြေခံပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာတောင်မှ ဂီတနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ခံစားချက်မူကွဲတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။၂၀၁၆ ခုနှစ်က Glasgow တက္ကသိုလ်နဲ့ စကော့တလန် SPCA အဖွဲ့ရဲ့လေ့လာမှုတွေအရ ခွေးတွေဟာလည်း သူတို့တစ်ကောင်ချင်းဆီမှာ ဂီတပေါ်ခံစားမှု ကွဲလွဲနေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ဒါပေမယ့် ရက်ဂေး နဲ့ Soft Rock ကတော့ခွေးတွေရဲ့ ခံစားမှုကိုအမြင့်ဆုံးပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ရက်ဂေး ဖခင်ကြီး Bob Marlay နဲ့ Fleetwood Mac တို့လည်းသူတို့ရဲ့ ခရေစီဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဂီတအပေါ် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ခွေးတွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားခဲ့သလဲ၊ ဒါကတကယ်ပဲလား? လေ့လာမှုတွေအရ ခွေးတွေဟာ ဂီတငါးမျိုးကို ခံစားတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေက Soft rock, Motown, Pop, Reggae နဲ့ Classical ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ တချို့ခွေးတွေကတော့ အပြင်းစားဂီတ ဟဲဗီးမက်တယ် ကိုချစ်ကြပါတယ့်။(Rocker Dogs တွေပေါ့ဗျာ)
သုတေသီတွေဟာ ခွေးတွေကိုသီချင်းဖွင့်ပေးထားပြီး သူတို့ရဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုပမာဏ၊ ဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲတွေနဲ့၊ ဟိုဟိုဒီဒီလျောက်သွားတာကအစ စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းယူခဲ့ကြတယ်။ ဘယ်လိုသီချင်းပဲဖွင့်ထားထား သူတို့ဟာ သိသိသာသာလဲလျောင်းပြီးနားထောင်ကြတယ်၊ နည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ် မတ်တပ်ရပ်ပြီးနေကြတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရက်ဂေးဂီတ နဲ့ ပျော့ပြောင်းတဲ့ရော့ခ် ကိုဖွင့်လိုက်ရင်တော့ သူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေဟာ အပြုသဘောပြောင်းလဲမှုတွေကို အမြင့်မားဆုံး ပြသကြပါတယ်။ ခွေးတွေရဲ့ ဂီတအပေါ်ခံစားမှုကို သုတေသနပြုတာဟာ ပေါကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခုလို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသုံးချဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ စစ်မှန်တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာသွားစရာတစ်ခုခုရှိတဲ့အချိန်တွေမှာ သောင်းကျန်းတတ်တဲ့ သင့်ရဲ့ခွေးကို အိမ်မှာထားခဲ့ပြီး မြန်မြန်လေးပြေးမှာလား? သင့်ခွေးအတွက်လည်းအကျိုးရှိစေမယ့်
ကြောင်ချစ်သူတွေရဲ့ကမ္ဘာဖြစ်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက Tashirojima ကျွန်း
SSPCA က Gilly Mendes Ferreira က BBC ကိုပြောခဲ့သလိုပဲ” ယခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Glasgow နဲ့ Edinburgh စင်တာတွေမှာ ခွေးဂေဟာတွေအတွက် သီချင်းဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အနာဂတ်ဆိုရင် ခွေးတစ်ကောင်ချင်းစီရဲ့ သီချင်းစာရင်း ပြုစုနိုင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခြေလေးချောင်းသူငယ်ချင်းတွေကို စောက်ရှောက်တဲ့နေရာမှာ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တော့မှာပါ” လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မဆို ပထမဆုံး ထင်မြင်ချက်ကောင်းတစ်ခု ရရှိစေဖို့ အကြံပြုချက် ၆ခု
တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးဝယ်ရမှ အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး သာမန်ထုတ်ကုန် ၁၀ မျိုး
ချစ်သူဘ၀နဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀မှာ ကျိန်းသေပြောင်းလဲသွာ...
ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ထိုင်းရွာမှာ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ မိချောင...